ပန်ဒိုရာ: ဘလော့ဂ် ၀ဲစွဲခြင်းနှင့် ကင်းရှင်းကြောင်း
မြွေပွေးပဲ၊ ဘလော့ရေးတဲ့ သူတွေအနေနဲ့
သူ့ဘလော့ကို ဖျက်တော့မယ်ဆိုရင် သူ့လင့်ခ်
ကို ချိတ်ဆက်ထားတဲ့သူတွေဆီ အကြောင်း
ကြတဲ့ စနစ်တော့ လိုမယ်လို့ ထင်တာပဲ၊
သူ့သဘော သူ့ဆန္ဒအရ ဘလော့ကို ဖျက်
လိုက်မယ်ဆိုရင် သူ့လင့်ခ်ကို ချိတ်ထားတဲ့
သူတွေ တန်းစီးပြီး အဲဒီ မဲဝဲ ဖြစ်သွားမလား
မသိဘူး၊ အခုကော်မန့်ကို ကျနော့်မှာ မဲဝဲ
မရှင်းရသေးလို့ Name/URL မှာ Name ထဲ
နာမည်ထည့်ပြီး လာရေးရပါတယ် .... :P
ကျနော်လည်းဖြစ်နေတယ် ဖြုတ်ဖို့ လုပ်နေတာ လင့်ထားတာတွေများတော့ ပြန်ထည့်ရမှာလည်း ပျင်းတယ် လင့်ထားတဲ့ ဘလော့တွေမမှတ်မိတော့မှာလည်းကြောက်တယ်း) ဒါမယ့် ၀ဲဆွဲနေတော့ လုပ်မှရမှာပေါါ့ ။
ကိုဇော်နဲ့ကိုအောင် ကျေးဇူးပါ ။ အတော်များများ လင့်ခ်တွေ ဖြုတ်ကုန်ကြရင်တော့
ပို့စ်အသစ်တက်တာ မြင်ချင်ရင် ကိုဇော်လုပ်ထားတဲ့ ဘလော့ဂ် http://allbloggerposts.blogspot.com/ ကနေပဲ သွားကြည့်ရမယ်။ ကိုဇော်လည်း တတ်နိုင်သမျှ အဲဒီဘလော့ဂ်ထဲကနေ ချိတ်ထားပါနော်။ တော်ကြာ လိပ်စာတွေ ပျောက်မှာစိုးလို့။
၀ဲစွဲတဲ့ အတိုင်းနေရင်ကော.. ဘာဖြစ်နိုင်မလည်း..
ဘယ်မှာမှ ကော့မန့် မရေးဘူးလေ..
ကော့မန့်တွေကို စပန်လုပ်ပစ်ရမယ်ဆိုတာ ရင်နာစရာဖြစ်နေတယ်။
Most of cases are because of hosting.
If some bloggers used the free hosting for uploading some images/fotos/songs and used the link in his/her blog, it can be blacklist when this hosting is listed as blacklist. Even for the infected blog itself can have no harm if he/she safely remove these links from the free hosting sites.
And relieved ....
သူများတွေ ရေးထားတာဖတ်ကြည့်ပြီး Scan လုပ်ကြည့်တော့မှ ကိုယ့်ဘလော့လေးလည်း ဝဲထိထားတာ အလန့်တကြား သိရပါတယ်။ အစ်မပေးထားတဲ့ Link ကနေ ကိုလင်းထက် သင်ပြထားတဲ့အတိုင်း လိုက်လုပ်ထားတာ လောလောဆယ်တော့ ကောင်းသွားပါပြီ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် အစ်မပန်ဒိုရာ။
ကျေးဇူးပဲ။ ကျနော်လည်း ဝဲရှိမရှိ စစ်ဆေးကြည့်ပြီးပြီ။ ဝဲကင်းရှင်းပါကြောင်း။း-)
ကျနော် ဟိုတစ်ခါ ကလိတာ လွန်သွားကတည်းက လင့်နေတာ ပျောက်သွားရင် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ http://allbloggerposts.blogspot.com/ ဒီနေရာလေးကို လုပ်ထားမိတာပါ။ အားလုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ နေရာလေးပါ။ လာထားသမျှ နဲ့ ကျနော်သိသမျှ လင့်တွေကိုတော့ ချိတ်ပေးသွားမှာပါ။
( စာရေးဖို့ စိတ်စုစည်း မရတာနဲ့ ဘလော့ဘက်ကို မဝင်ဖြစ်ဘူး ဖြစ်နေလို့ အခုမှ ရောက်ဖြစ်တယ်ဗျာ။ )
အဲဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီမှာတော့ နည်းနည်း ရေးထားပါတယ်၊ http://www.aung.info/?p=1496
စစ်ပြီးပြီ... မဗေဒါဆိုဒ်က ကင်းရှင်းပါတယ်... Print screen ကို ပိုစ့်အနေနဲ့ တင်လိုက်ပါ့မယ်... သတင်းပို့တာပါ...